गगन थापाले ओलीलाई भने – ‘हामी तपाईको साथमा छाै’
नेपाली पब्लिक शनिबार, जेठ १, २०७८
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताको जिवन रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार आफ्नो फेसबुक पेजमा एउटा भिडियो हालेर महामारीविरुद्द लागिपर्न उनले आग्रह गरेका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू, फेरी एकपटक मौका पाउनु भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अब केही दिन तपाईं अन्य सबै कुरा छोडेर मन, ध्यान, शक्ति, उर्जा, संयन्त्र सवै महामारीसँग जुध्न लगाउनुहोस।’
नेता थापाले यो कार्यमा उनको साथमै उभिने प्रतिवद्दता जाहेर गरेका छन्। उनले भने, ‘अबको केही समय तपाईंसँगका सवै असहमतिलाई विसाएर जनताको जीवन रक्षा गर्न तपाईंको साथमा उभिनेछौं।’
जनताको प्रश्न : नेताज्यू, सकियो चटक ? अब कोभिडतिर ध्यान दिने की?
गगनको भनाई जस्ताको त्यस्तैः
प्रधानमन्त्रीमा तपाईको पुनर्नियुक्तीसँगै कोरोना महामारीविरुद्धको महायुद्धको सेनापतिको जिम्मेवारी फेरि पनि तपार्इको काँधमा आएको छ। यो महामारीबाट हामीले धेरै जीवन गुमाइसक्यौं, अझ कति धेरै गुमाउने हो थाहा छैन।
यीमध्ये धेरैलाई बचाउन सकिन्थ्यो। अझै पनि बचाउन सकिन्छ तर, मात्र सम्भव छैन काम चाहिएको छ। प्रार्थना मात्र सम्भव छैन तपाई हाम्रो प्रयत्न चाहिएको छ। त्यसैले पुनर्नियुक्ती हुनुभएको यो क्षणमा म मेरा प्रधानमन्त्रीलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु अब केही दिन मात्र केही दिन छोडिदिनुहोस् पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन चर्काउन, फकाउन, फुटाउन सबै कुरा छाड्दिनुस् केही दिनलार्इ सभा सम्मेलन, भेटघाट, उद्घाटन, शिलान्यास सबै रोक्दिनुस्।
केही दिनलाई बोल्न बन्द गर्दिनुस्। यथार्थलाई स्वीकार गर्नुस्। अनि तपाईको मन ध्यान तपाईको सम्पूर्ण शक्ति तपाईको समय शतप्रतिशत यही महामारीविरुद्धको युद्धमा लगाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो तपाईसँग थुप्रै अहसमतीहरु छन्। तपाईकको विचार र व्यवहारप्रति मेरो थुप्रै प्रश्नहरु छन्।
तपाईको वचन र कर्मप्रति मेरो थुप्रै अुन्तुष्टिहरु छन्। तर, यी केही दिन यो असन्तुष्टि, असहमती, प्रश्नहरु सबैलाई थाती राख्नका लागि म तयार छु, हामीहरु तयार छौं। तपाईका समर्थक त सधैं तपाईसँगै छन्। तर तपाई इमान्दारीपूर्वक यो महामारीसँग जुधिरहेका नेपाली जनताको जीवन जोगाउन लाग्न हो भने म र मजस्ता धेरैलाई नदी घरको तपाईको किरानामा हैन तपाईसँगै उभिएको पाउनुहुनेछ।
तपाईलाई मद्दत गरिरहेको पाउनुहुनेछ। तपाईको सरकारलाई सफल बनाउन निम्ती लागिरहेको पाउनुहुनेछ। त्यसैले म तपाईलाई एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजी तपाई फेरिएकपटक मौका पाउनुभएको छ। यो मौकालाई खेर नफालौं।
यो पटक अलि फरक ढंगले काम गरौं। तपाई हामी मिलेर जीवनबाट आशा गुमाइसेकालाई आशा दिने प्रयत्न गरौं। अक्सिजन नपाएर छट्पटाइरहेलाई सास दिने प्रयत्न गरौं। अनि आर्यघाटमा पुग्ने लाशहरुको संख्या घटाउने प्रयत्न गरौं मिलेर गरौं।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १, २०७८ १४:१५